Macluumaad ku saabsan Cuba, ma ogtahay xaqiiqooyinkan xiisaha leh ee ku saabsan Cuba? | Safarka Absolut
Mar kasta oo aad ka fikirto Cuba, dhul qurux badan, xeebo qurux badan, dad faraxsan oo saaxiibtinimo leh, iyo sidoo kale caadooyin iyo caadooyinka Cuba in badan oo naga mid ahi hore u ogaayeen. Laakiin xitaa haddii aysan ahayn markii ugu horreysay ee aad u safarto waddankan Kaaribiyaanka ah, waa fikrad fiican inaad naftaada la socodsiiso oo aad wax yar ka sii ogaato jasiiraddan cajiibka ah. Sidaa darteed, hoosta waxaan wadaagnaa macluumaad ku saabsan Cuba iyo xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Cuba.
1 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Cuba
1.1 Taariikhda Cuba
1.2 Horumarinta Cuba
1.3 Xaqiiqooyin badan oo xiiso leh oo ku saabsan Cuba
Si kooban dib loogu eego xaqiiqooyinka xiisaha leh ee Cuba, waxaan diirada saari doonaa dhinacyada qaar sida taariikhda, horumarka iyo macluumaad kale oo ku saabsan Cuba oo adiga waxtar kuu leh.
Waxaa laga yaabaa inaadan aqoon, laakiin magaca rasmiga ah ee Cuba waa "Jamhuuriyadda Cuba", taas oo iyaduna ka kooban Jasiiradda Cuba, Isla Juventud iyo dhawr jasiirado oo yaryar.
Socdaallada soo noqnoqda badanaa waxay u tixraacaan Cuca sida "El Caimán" ama "El Cocodrilo", inta badanna waxay ugu wacan tahay inay u muuqato inay tahay qaabkeeda marka laga eego muuqaalka hawada.
Dhul balaarsi awgood Cuba waxaa loo tixgeliyaa inay tahay jasiiradda ugu weyn Kariibiyaanka, maadaama ay ku fadhido dhul dhan 110.860 km².
Intaas oo keliya maahan, Cuba waxay leedahay in ka badan 11 milyan oo qof, taasoo ka dhigaysa jasiiradda labaad ee ugu dadka badan Caribbean-ka, iyo sidoo kale jasiiradda lixaad ee ugu dadka badan adduunka oo dhan.
Mid kale oo ka mid ah xaqiiqooyinka xiisaha leh ee Cuba waa in dadkii ugu horeeyey ee degenaa ahaayeen Hindida Mareykanka ee loo yaqaan Ciboney. Waxay ka soo haajireen Koonfurta Ameerika, halka Taíno ay ka timid Hispaniola intii lagu jiray qarnigii XNUMXaad ee AD iyo Guanajatabey, oo ku yaalay qaybta galbeedka Cuba markii ugu horreysay ee reer yurub yimaadeen.
Christopher Columbus wuxuu yimid xeebta waqooyi-bari ee Cuba bishii Oktoobar 28, 1942, oo aad ugu dhow halka hadda loo yaqaan Bariay, ee Gobolka Hoguín. Waqtigaas, Columbus wuxuu sheegtey jasiiradda Cuba inuu yahay Boqortooyada cusub ee Spain.
In kasta oo aysan jirin wax hubaal ah oo arrintan ku saabsan, haddana waxaa la rumeysan yahay in magaca Cuba uu ka soo jeedo afka Taíno. Tarjumaaddaada kuugu dhow ayaa noqon karta "Meesha dhul barwaaqo ah ku badan yahay" (cubao) ama "meel fiican" (coabana) Sidoo kale waxaa la rumaysan yahay in Christopher Columbus uu Cuba ugu magac daray Ciudad Cuba dalka Boortaqiiska.
Degitaankii ugu horreeyay ee Isbaanish ah ee Baracoa waxaa aasaasay Diego Velázquez de Cuéllar sanadka 1511.
La Habana waa magaalada ugu dadka badan Cuba Iyadoo ay ku noolyihiin in ka badan 2 milyan, waxay sidoo kale tahay tan saddexaad ee ugu dadka badan Caribbean-ka. Waa caasimada Kuba waana halkan halka ay ku yaalliin meydadka ugu sareeya ee Gobolka iyo Dowlada Kuuba.
Horumarka jasiiradda oo ah Gumaysi Isbaanish ah, dadka u dhashay Cuba ayaa si dhakhso leh hoos ugu dhacay, badanaa iyada oo ay ugu wacan tahay cudur, iyo sidoo kale xaaladihii adkaa ee jiray qarniga soo socda.
Tiro aad u tiro badan oo addoomo Afrikaan ah ayaa loo soo dhoofiyay Cuba si ay uga shaqaystaan ​​bakooradda sonkorta iyo kafeega. Natiijo ahaan, Havana waxay noqotay baaburka daahfurka maraakiibta sanadlaha ah ee qaaliga ah ee u safraya Spain ee ka yimaada Peru iyo Mexico.
Cuba waxay sii ahaatay gumeysi Isbaanish ilaa 1898, in kastoo ilaa shan madaxweyne oo kala duwan ay isku dayeen inay iibsadaan jasiiradda intii u dhaxeysay 1845 iyo 1898. Xaqiiqdii, Madaxweyne McKinley waxay u soo bandhigtay 300 milyan oo doolar si ay ugu iibsato Cuba, wax yar uun ka hor intaan Mareykanku ku soo duulin intii lagu jiray Dagaalkii Isbaanishka iyo Mareykanka ee 1898.
Cuba waxay heshay xornimadeeda kadib guuldaradii Spain ee Dagaalkii Isbaanishka iyo Mareykanka. In kasta oo xaqiiqda iyo mahaddeeda ay leedahay Heshiiskii Paris, Mareykanka waxaa looga tagey gacan ku haynta jasiiradda sidii maxmiyad ahaan Janaayo 1899 oo ay sii dheereysey maamulkeeda illaa 1902.
Xaqiiqooyin badan oo xiiso leh oo ku saabsan Cuba
Waxaan maqaalka ku soo afmeeraynaa afar xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Cuba oo ay tahay inaad ogaato:
Sannadkii 1959, Fidel Castro waxay ka muuqataa goobta qayb muhiim ah oo ka mid ah jabhadii kacdoonka shuuciga taas oo aakhirka u horseedi doonta guul. Laga bilaabo xilligaas, dawladda kali-taliska ah ee Fidel Castro waxay sii jiri doontaa muddo 50 sano ah, illaa iyo Febraayo 2008, markii lagu qasbay inuu iska casilo jagadiisa sababo caafimaad dartiis.
Madaxweynaha Mareykanka, Dwight David Eisenhower, ayaa ansixiyay 1960, qorshe CIA ay ku hubeyneyso kuna tababarto koox ka mid ah qaxootiga Cuba iyadoo ujeedadu tahay afgembiyaan dowladdii Castro. Duullaanka caanka ah ee Baay ee Doofaarradu wuxuu dhacay Abriil 14, 1961. Waqtigaas, ku dhowaad 1.400 oo qaxooti Cuba ah ayaa ka degay Baay of Pigs, hase yeeshee waxay ku guuldareysteen isku daygoodii ahaa inay afgembiyaan Dawladda.
Cuba dhexdeeda, dhammaan muwaadiniinta ka weyn 16 sano jir ee aan lagu xukumin fal dambiyeed way codeyn karaan. Doorashadii ugu dambeysay ee lagu qabtay Cuba waxay ahayd Febraayo 3, 2013, doorashada xigta waxay ahayd 2018.
Raúl Castro, oo haatan xukuma Cuba, ayaa ku dhawaaqay inuu xafiiska ka tagayo sanadka 2018, marka ay ku egtahay mudadiisa 5-ta sano ee haatan.
Ma ogtahay inbadan xaqiiqooyinka xiisaha leh ee Cuba Maxaan ku kordhin karnaa wixii aan kuu sheegnay? Wax nooga sheeg khibradaada oo naga caawi sidii aan u ballaarin lahayn macluumaadkan ku saabsan Cuba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Macluumaad ku saabsan Cuba
Cristobal Colon wuxuu yimid Cuba 1492 ma ahan 1942 hahaha, salaan
Xilliga TV-ga ee 2019-20 waxaa loo qaabeynayaa inuu noqdo kan ugu adag iyo sidoo kale sanadka aan la tirin karin. Waxaa jira heshiisyo waaweyn oo la yaab leh, duuliyayaashii ugu horreeyay ee soo socda iyo sidoo kale kaliya dhowr dib u soo kabasho / soo nooleyn shaqooyinka, sidoo kale. Si kastaba ha noqotee sida sheegashadu u socoto, "La soco duugga, oo ku jira nooc cusub." In kasta oo aruurinta qaar ay ku egtahay qorshe horay loo sii qorsheeyay, oo si miisaaman isu dheellitiran, haddana bandhigyo kala duwan 'culeysyada nolosha ayaa dhab ahaan loo yareeyay horumarka gaaban. Marka, nasiib daro, hoosta waxaa ku yaal liistada dhammaan TELEFISHINADA oo laga yaabo inaad daaha ka rogto sannadkan.
Ku soo jawaab Putlockerykam